व्हाट्सएप बनाम सिग्नल - कुन योग्य छ? - सामाजिक
ती दिनहरू बितिसकेका छन् जब व्यक्तिहरू उनीहरूको फोन मार्फत सन्देशहरू पठाउन भुक्तान गर्थे। आईएममा ब्लाम पछि (इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग), फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले यस अवसरलाई समातिरहेका छन्। IM ले तपाईको सन्देशहरू पठाउन ईन्टरनेट प्रयोग गर्दैछ।
सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो नि: शुल्क हो, र तपाईं सन्देश पठाउन एक टावर खोज मा दौड्न को लागी आवश्यक छैन। यो लेखले दुई सबैभन्दा लोकप्रिय ईन्स्टन्ट सन्देश सेवाहरू व्हाट्सएप र सिग्नलको तुलना गर्नेछ। सबै सुविधाहरू ध्यानमा राखिनेछन्, र अन्तमा, विजेताको घोषणा गरिनेछ। त्यसो भए सुरू गरौं।
व्हाट्सएप बनाम सिग्नल - विस्तृत तुलना
व्हाट्सएप र संकेतको मुख्य विशेषता भनेको इन्टरनेट मार्फत प्रत्यक्ष सन्देशहरू पठाउनु हो। व्हाट्सएप अब फेसबुक समुदायको एक हिस्सा हो, जसले तपाईंलाई सोशल मिडिया पावर प्रयोग गर्ने अधिक क्षमता प्रदान गर्दछ। व्हाट्सएपले नयाँ अपडेट पनि ल्याइरहेको छ जुन यूपीआई र लेनदेनको भुक्तान समर्थन गर्दछ, जुन एसएमएस सेवाको लागि धेरै दुर्लभ छ। तपाईं मिनी क्लिपहरू साझा गर्न सक्नुहुनेछ जुन व्हाट्सएपमा गायब हुनेछ। जे होस्, यो सुविधा संकेत मा उपलब्ध छैन।
यूट्यूब तथ्या .्क - तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
के नेटफ्लिक्स अहिले तल छ? प्रत्यक्ष स्थिति जाँच गर्नुहोस्
यद्यपि, सिग्नलले यो व्हाट्सएप भन्दा अधिक सुरक्षित तरिकामा गर्दछ। त्यहाँ २ messages घण्टा पाठ सन्देश राख्न विकल्प छ, र धेरै अधिक सुरक्षा प्रोटोकलहरू प्रयोग गरिन्छ। सिग्नलले दावी गर्‍यो कि तपाइँको कुनै पनि डाटा भण्डारण भइरहेको छैन, जुन व्हाट्सएपको लागि पर्याप्त असम्भव छ। दुबै अनुप्रयोगहरूले स्पाम र ब्यक्तिहरूको अवरोध समर्थन गर्दछ। दुबै सेवाहरूले समूह कुराकानी, अभिलेख कुराकानीहरू, र भिडियो कलहरू समर्थन गर्दछ।
१. व्हाट्सएप ईन्टरफेस
सम्पूर्ण इन्टरफेसमा व्हाट्सएपको र a्गीन दृष्टिकोण छ। यो निश्चित गर्दछ कि यो हरियो र सेतो विषयवस्तु भर मा प्रमुख रहन्छ। यसले दुबै अँध्यारो साथै लाइट मोडलाई पनि समर्थन गर्दछ। प्रयोगकर्ता अनुभव कुनै ठूलो छ। तपाईंसँग यसको पूर्ण हदमा अपरेट गर्न केही आधार ज्ञान हुनुपर्दछ। सुविधाहरूको ओभरलोडका कारण, यो कहिलेकाँही जटिल हुन्छ जुन सुविधा कहाँ अवस्थित हुन्छ।
२. संकेत संकेत
प्रयोगकर्ता इन्टरफेस अपेक्षाकृत कम छ। जस्तो रंग योजना छैन। संकेतको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष प्रयोगकर्ता इन्टरफेस एकदम सहज छ। सबै कुरा तपाईको अगाडि अवस्थित छन्, यो बटनहरू, समूहहरू, कलहरू हुन। तसर्थ यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी अपेक्षाकृत अधिक सहज हुन्छ।
WhatsApp सुरक्षा -
प्रत्येक तथाकथित नि: शुल्क सेवा प्रायः मूल्यको साथ आउँदछ र मूल्य ट्यागको होइन तर तपाईंको डाटाको लागतको साथ। यद्यपि व्हाट्सएपले एन्ड टु-एन्ड ईन्क्रिप्शन भएको दाबी गर्‍यो, तर मानिसहरू यसको प्रयोगको बारे थोरै पागल छन्। फेसबुकले सेवाको स्वामित्व राख्दछ र हामी सबैलाई फेसबुकको डाटा नीति बारे सचेत गराउँछ।
सिग्नल सुरक्षा -
अर्कोतर्फ, सिग्नल व्हाट्सएप भन्दा धेरै सुरक्षित छ। सिग्नलमा गरिएको समीक्षाको प्रमाण हो कि उनीहरूसँग राम्रो सुरक्षा छ, र मानिसहरू खुशी छन्। यस अनुप्रयोगले हराइरहेका सन्देशहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ, जसले यसलाई अधिक सुरक्षित बनाउँछ। व्हाट्सएपमा व्यक्ति पत्ता लगाउने सुविधा पनि छ; तसर्थ तिनीहरू सेवा को उपयोग को बारे मा अधिक सशंकित हुन्छन्।
व्हाट्सएप विशाल कम्पनीहरु संग सहकार्य गर्न को लागी सक्षम छ को रूप मा अब यो सीधा फेसबुक अन्तर्गत छ। उनीहरूका धेरै सुविधाहरू न्यूजफीड भित्ता बाहेक फेसबुकको समान प्रतिनिधित्व हुन्। आजकल, व्हाट्सएपले भारतीय यूपीआई प्रणालीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जसले स्थिर भविष्य देखाउँदछ।
सिग्नल केवल एक एसएमएस सेवा है; अनुप्रयोगको रमाईलो बनाउनको लागि यसको कुनै सहयोग छैन। यद्यपि सुविधाहरू यस अनुप्रयोगमा कुनै पनि सम्झौता गरीरहेका छैनन्। तपाईंले केहि 'अतिरिक्त' छोड्नुहुनेछ।
व्हाट्सएप उपयोगकर्ता अनुकूलता -
वरपर २ अरब प्रयोगकर्ताहरू, व्हाट्सएप नम्बर एक सन्देश अनुप्रयोग हो संसारमा। यो Play Store मा मात्र billion अर्ब भन्दा बढी डाउनलोड छ (यो डाउनलोड संख्या हो प्रयोगकर्ता को संख्या संग भ्रमित नगर्नुहोस्)। साथै, व्हाट्सएपले व्हाट्सएप वेबको माध्यमबाट कम्प्युटरहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ।
संकेत प्रयोगकर्ता अनुकूलता -
यद्यपि, सिग्नलका लाखौं प्रयोगकर्ताहरू छन्। यो Play Store मा केवल १० करोड डाउनलोड छ। यस्तो देखिन्छ कि व्हाट्सएपमा सिग्नल भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन्, यद्यपि सुरक्षाको दिशामा ब्यूँझिएका मानिसहरू, व्हाट्सएपको लागि उपयुक्त छैनन्।
१. व्हाट्सएप उपकरण उपलब्धता
सेवा एन्ड्रोइड / आईओएस / विन्डोजको साथ साथै म्याकमा उपलब्ध छ। यद्यपि विन्डोजको अनुभव त्यति ठूलो छैन; यो केवल वाट्सएपको विस्तार जस्तो लाग्छ। तपाईंको दुबै उपकरणहरूलाई तपाईंको डेस्कटप सेवा प्रयोग गर्न समान नेटवर्कमा जडान गर्न आवश्यक छ।
२. सिग्नल उपकरण उपलब्धता
यहाँ सम्म कि सिग्नल माथी सूचीबद्ध सबै उपकरणहरुमा उपलब्ध छ। यसको WhatsApp मा एक फाइदा छ, अर्थात्, यसलाई लिनक्समा प्रोग्रामरहरूको लागि कोडहरू साझा गर्नका लागि उपलब्ध छ। यो GitHub को वाट्सएप संस्करण जस्तै छ। यो एक स्ट्यान्ड-एक्लो अनुप्रयोग पनि हो कि तपाईं एक समान नेटवर्कमा आफ्नो उपकरणहरू जडान गर्न आवश्यक छैन।
निष्कर्ष: कुन एक उत्तम हो?
मुख्य सुविधाहरू विजेता:व्हाट्सएप
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस विजेता:व्हाट्सएप
प्रयोगकर्ता विजेता संख्या:व्हाट्सएप
उपकरण उपलब्धता विजेता:सिग्नल
परिणामहरू देखाउँदा, व्हाट्सएपले यहाँ विजय प्राप्त गर्न सक्छ। योसँग थप सहयोगीहरू र प्रयोगकर्ताहरू छन्, यो मार्फत चम्किन्छ। सिग्नल व्यक्तिहरूमा आधारित छ जो स्पेक्ट्रमको टेक्निकल पक्षमा छन्। यसबाहेक, फेसबुकले व्हाट्सएप किने पछि, त्यहाँ सुविधाहरूको ओभरलोड भएको छ। तपाइँ सिग्नल द्वारा प्रदान गरिएको न्यूनतम डिजाइन र अनुप्रयोगको विचार गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
मलाई आशा छ कि डाउनलोड गर्दा कुन अनुप्रयोग छनौट गर्ने बारेमा केही स्पष्टता पाउनुभयो। सिग्नलले व्हाट्सएपमा गरेको एक मात्र फाइदा भनेको सुरक्षा हो। व्हाट्सएपले यसको कहिल्यै अन्त नहुने सुविधाहरूको सूचीको साथ अधिक प्रदान गर्न सक्दछ। यदि तपाइँसँग के अनुप्रयोग र सिग्नलको बारेमा कुनै पनि अधिक राय वा प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई तलको टिप्पणी बाकसमा जानकारी दिनुहोस्।
कसरी कम्प्युटरमा ITunes डाउनलोड गर्ने
के विद्यार्थीहरू अमेजन प्राइम फ्री हुन्छन्
कुनै खेल छैन जीवन एपिसोड १ अंग्रेजी डब किसानाइम
विन्डोज १० का लागि एन्ड्रोइड प्लेयर
रमाईलो खेल अनब्लक अनलाइन खेल्न
कसरी स्टीम खेल फिर्ता गर्न